काफिरहरूले छोडेका सुरागहरू | स्टाइलिश पुरुषहरू
काफिरहरूले छोडेका सुरागहरू
एलिसिया टोमेरो | 27/05/2022 10:00 | जोडी र सेक्स
त्यहाँ धेरै संयोगहरू छन् जुन झल्किन्छ र त्यो संकेत गर्दछ भनेर पत्ता लगाउन यो विचलित र धेरै आपत्तिजनक छ। तपाईंको पार्टनर अविश्वासी छ सायद तिनीहरू केवल कल्पना र सबै हुन् थप खुलासा नभएका संयोगहरूलाई संकेत गर्नुहोस्, तर जब त्यहाँ पहिले नै धेरै छन्, सबै कुरा बेवफाई इंगित गर्दछ। हामी भेट्नेछौं काफिरहरूले कस्तो सुराग छोड्छन् जब यस्तो केहि हुन्छ।
अविश्वासका घटनामा बृद्धि भएको छ, कुनै पनि प्रकारको जोडी वा विवाह बीच। यी घटनाहरू वर्णन गर्ने कारकहरू धेरै भिन्न छन्, चाहे न्यूरोलजिकल कारणहरू, व्यवहार समस्याहरू, आनुवंशिकी, जैविक, आदि। यी कुनै पनि तथ्यहरूमा, यो केवल ध्यान दिन लायक छ काफिरहरूले छोडेका सुरागहरू के छन्।
1 सामाजिक सञ्जाल मुख्य स्रोत हो
2 लगातार झूट
4 अनौठो र असामयिक प्रस्थान
5 घर आएपछि नुहाउँछिन् ।
6 मानसिक रूपमा तपाई सधैं अरुको बारेमा सोचिरहनुहुन्छ
7 उनका साथीहरूले केही लुकाएको देखिन्छ
8 सेक्स गर्दा के हुन्छ ?
सामाजिक सञ्जाल मुख्य स्रोत हो
धेरै बेवास्ताहरू इन्टरनेटबाट सुरु हुन्छन्। अज्ञात व्यक्तिहरूसँग अधिक र अधिक सम्पर्कमा रहेको तथ्य र त्यो प्रोफाइलको पछाडि कसैले बन्दरगाह गरेको रहस्यलाई सम्बोधन गर्दै, बनाउँछ। जिज्ञासा बढाउनुहोस्, त्यसपछि सम्पर्क र अन्तमा मिति आउँछ।
नयाँ मान्छे भेट्नु दिन को क्रम को भीड को लागी धन्यवाद छ अनलाइन फ्लर्ट गर्न वेबसाइटहरू र एपहरू। मोबाइल फोन सामान्यतया मुख्य माध्यम हो र जब तपाइँको साझेदार लुकाउन वा आफ्नो पहुँच ब्लक गर्न को लागी, त्यहाँ एक सम्भावित सम्बन्ध को कारणहरु मध्ये एक हो।
उनीहरूले पहिले फोन कसरी प्रयोग गर्थे भन्ने बारे उनीहरूले सामना गर्न सक्ने मनोवृत्तिले उनीहरू हुन सक्ने संकेत दिन्छ अन्य मान्छे संग फ्लर्ट। यस यन्त्रको निरन्तर प्रयोगले कुरा गर्नको लागि धेरै कुरा दिनेछ, किनकि यो सधैं सूचनाहरूमा ध्यान दिनेछ। सधैं पनि तपाईं आफ्नो पहुँच मा पूर्ण नियन्त्रण हुनेछ ताकि अन्य मानिसहरूले सम्पर्क गर्न वा यसको सामग्री पढ्न नसक्ने।
एक निरीक्षण, एक निरीक्षण वा बहाना भएको कुनै पनि तथ्य सान्दर्भिक हुन सक्छ। घटनाको यो श्रृंखला जब तथ्य हो तिनीहरू धेरै निरन्तर छन् र तपाइँ थोप्लाहरू जडान गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र तपाईंले याद गर्नुभयो कि धेरै पटक तिनीहरू जोड्दैनन्।
हुनसक्छ छलफल सुरु गरौं र त्यो अर्को व्यक्तिले तथ्यहरूलाई अस्वीकार गर्छ र साझेदारलाई धेरै नियन्त्रण गर्ने, पागल र अति ईर्ष्यालु भएकोमा दोष दिन्छ। सामान्यतया जब यो हुन्छ कि एक विश्वासघाती व्यक्ति समातिएको छ, प्रतिक्रिया सधैं सतर्क हुनेछ, उसले नराम्रो प्रतिक्रिया दिनेछ, रिसले र धेरै क्रोधित हुनेछ।
यस्तो हुन्छ एक अप्रत्याशित परिवर्तन र छवि परिवर्तन संग, उनी आफ्नो कपाललाई अझ राम्ररी लगाउँछिन् र अत्तर पनि प्रयोग गर्छिन् जब यो पहिले प्रयोग गरिएको थिएन, केहि भइरहेको छ भनेर सानो संकेत दिन सक्छ।
सायद यो थोरै परिवर्तन हो किनभने तपाईंले अनुभव गरिरहनुभएको छ अस्तित्व संकटको परिवर्तन र आफैलाई पुन: आविष्कार गर्न चाहन्छ। केवल अवलोकन गर्न प्रयास गर्नुहोस् जब यी घटनाहरू मेल खान्छ र दिनको समयमा के भयो किनभने उहाँ सम्भवतः मितिमा भएको छ।
अनौठो र असामयिक प्रस्थान
ती अप्ठ्यारो निकासहरू र एक ठूलो बहाना संग तिनीहरू सधैं मानिसहरूलाई कुरा गराउँछन्। जब त्यहाँ घटनाहरूको शृङ्खला हुन्छ जुन अब नियमित रूपमा घट्दैन, यो पहिले नै त्यस्तो चीज हो जसमा यसको प्रश्नहरू छन्। तपाईको अप्रत्याशित प्रस्थानहरू तिनीहरूसँग सधैं बहाना छ, भन्छन् कि उसले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु पर्छ, एउटा काम चलाउन र सधैं धेरै अस्पष्ट जवाफहरू लिएर आउँदैछ।
साथै, जब तपाईं यस विषयमा गहिरो जान चाहनुहुन्छ रक्षात्मक हुन्छ र भन्छ, के अब म केहि गर्न सक्दिन? म बाहिर जान सक्दिन? यी अवस्थाहरूमा तपाईंले भन्नको लागि मौका लिन सक्नुहुन्छ तपाईं नजिकैको कुनै काम गर्न उहाँलाई साथ दिनुहुनेछ, यहाँ तपाईंले यो कस्तो प्रतिक्रिया देख्नुहुनेछ। यदि ऊ त्रसित वा त्रसित हुन्छ भने, हुनसक्छ यो किनभने उसले केहि गर्न गइरहेको थियो जुन उसले तपाईलाई थाहा नपाओस् भन्ने चाहन्थ्यो।
घर आएपछि नुहाउँछिन् ।
यो धेरै सामान्य कुरा हो। धेरै अविश्वासी मानिसहरू जब तिनीहरू आफ्नो प्रेमीसँग डेटबाट फर्किन्छन् तिनीहरू कुनै पनि ट्रेस मेटाउन नुहाउने प्रयास गर्छन् जसले तिनीहरूलाई दोष दिन सक्छ। यदि तपाइँ साँच्चै केहि शंका गर्नुहुन्छ भने, अन्य निशानहरू खोज्नुहोस् जुन रहन सक्छ, जस्तै उसको लुगामा। तपाईंले केही इत्रको नमूनाहरू र सानो अप्रत्याशित दाग पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
मानसिक रूपमा तपाई सधैं अरुको बारेमा सोचिरहनुहुन्छ
निष्कर्षमा नलाग्नु राम्रो हो, तर उनको टाउकोमा केहि छ र यसले उसको टाउको अर्को ठाउँमा राख्छ। यो राम्रो संकेत होइन यदि उसले तपाईलाई के सोचिरहेको छ भनेर व्याख्या गर्दैन र तपाई वास्तवमै उसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने म एक प्रकारको रहस्यमय सोचमा हराएँ ।
उनका साथीहरूले केही लुकाएको देखिन्छ
जब तपाईं समूहमा बस्नुहुन्छ अब त्यो कम्पन छैन जुन अस्तित्वमा थियो। कहिलेकाहीँ स्थिति तनावपूर्ण हुन्छ र शंकास्पद मौनता सिर्जना हुन्छ। यो जस्तो छ कि तपाईं त्यस क्षणमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्न किनभने यो कष्टप्रद रूपमा आउँछ। यस अवस्थामा केहि गर्न सकिदैन, तपाइँ दृश्य सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न र पागल बन्न सक्नुहुन्न, तर तपाइँले केहि भएन जस्तो व्यवहार गर्नुपर्नेछ।
सेक्स गर्दा के हुन्छ ?
सायद यस बिन्दुमा त्यहाँ दुई फरक सिद्धान्तहरू छन्। व्यवहारहरू सामान्यतया भिन्न हुन्छन्, तर के धेरै पटक हुन्छ धेरै पटक सेक्स घट्छ। अन्य मानिसहरूले सेक्स घट्दै गएको मात्र महसुस गर्दैन, तर यसको विकास गर्ने तरिकामा। के हुन सक्छ? त्यो व्यक्तिसँग अन्य सरोकारहरू र मनपर्नेहरू छन् जुन उनीहरूसँग पहिले थिएन र यसले वृद्धि पनि देखाउन सक्छ libido वा ठूलो गिरावट।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फिट » जोडी र सेक्स » काफिरहरूले छोडेका सुरागहरू